Home अन्य घरमा कसरी बाह्रैमास ढकमक्क फूलहरु फूलाउने ?
भान्साबाट निस्कने जैविक फोहोर–मैलालाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्ता फोहोर–मैलालाई प्लाष्टिकको भाँडो वा खाल्डोमा कुहाएर फूलको लागि मल बनाउन सकिन्छ ।हामीलाई पूजापाठ, बिहेकार्जे जतिबेला पनि फूलको आवश्यक पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा फूलको अभाव झेल्नुपर्दैन ।
कहाँ रोप्ने ? -गाउँमा फूलबारी बनाउने पर्याप्त ठाउँ हुन्छ । त्यसैले ग्रामिण भेगमा फूल रोप्नु, फूलबारी बनाउनु समस्या हुँदैन । मनग्ये ठाउँमा फूलबारी बनाउँन सकिन्छ । फूलबारी बनाएपछि मौरीको घार पनि राख्न सकिन्छ । फूलबारी मौरीको लागि राम्रो चरन बन्छ ।
कसरी रोप्ने ? पर्याप्त खुला ठाउँ वा बगैंचा छ भने आफैले डिजाइन गरेर फूल रोप्न सकिन्छ । त्यस्तो ठाउँ नभए गमलामा फूल रोप्न सकिन्छ । फूल रोप्नका लागि मलिलो माटो चाहिन्छ । माटो र मललाई मिश्रण गरेर गमला भर्ने, त्यसमा फूल रोप्ने । गमला राखिएको ठाउँमा सिंचाई गरिरहनुपर्ने भएकाले गमला राखिने ठाउँ अलि व्यवस्थित हुनुपर्छ । फूल रोपेपछि त्यसको रेखदेख गरिरहनुपर्छ । उचित समयमा सिंचाई गर्ने, मल लगाउने, गोडमेल गर्ने, झार उखेल्ने, किराबाट जेगाउने गर्नुपर्छ ।
कस्तो फूल रोप्ने ? –संभव भएसम्म सदावहार फूल रोप्नु राम्रो हुन्छ, जो बाह्रैमास हरियो देखियोस् । बाह्रैमास फूलिरहोस् । त्यस्ता प्रजातिका फूलहरु पनि हुन्छन् । यस्ता फूलहरु जुनसुकै महिनामा पनि फुलाउन सकिन्छ ।